Window Server 2003 to Linux Server — MYSTERY ZILLION
Window Server 2003 to Linux Server
June 2009 edited September 2010 in Linux/Unix
ကျွန်တော့်အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ADSL Modem နဲ့ Window Server 2003 နဲ့အတူ Microsoft ISA 2004 တင်ပြီး Run နေပါတယ်..။ Client စက်တွေကတော့ Window XP ပဲပေါ့..။
ခု ကျွန်တော့်အထက်လူကြီးက သူ့ဆိုင်ကို server မှာ Linux တင်ပြီး run ချင်ပါသတဲ့..။
အဲ့အတွက် ကျွန်တော်က Linux Server အကြောင်းလုံး၀မသိပါဘူး..။:((:((:((:((
1. ဘယ်လို Install , configure လုပ်ရမလဲ
2. Printer Driver ကိုကော Linux က ကောင်းကောင်းသိနိုင်ပါ့မလား
3. Cafezee တို့လို Cyber Cafe Software တွေလို Linux ပေါ်မှာ Run နိုင်တာကော ရှိရဲ့လား
4. Window XP client တွေရဲ့ Shared Folder တွေကိုကော.. ခေါ်လို့ရပါ့မလား
5. ဘာတွေ ၀ယ်ဖို့လိုအပ်သလဲ.. ဘာလို Hardware တွေ လိုအပ်လဲ
ဒါမှ အထက်လူကြီးကို တင်ပြလို့ လွယ်မှာပါ..။:)
ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီ ဖြေပေးကြပါ :77:
Ebook များရှီရင်လည်း ၀ိုင်း၀န်း တင်ပေးကြပါ..:101:
Linux Server လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ cafezee, cafepro ဆော့၀ဲတွေ တင်လို့မရပါ။ ဒါကြောင့် သီးသန့် တစ်လုံးသုံးရင်ကောင်းပါတယ်။ Linux ရဲ့ system req: ကတော့ တော်တော် နည်းပါတယ်။ Proxy Server လုပ်မယ်ဆိုရင် CPU Dual Core, Memory 2G, HDD 80 or 160 လောက်ဆိုရပါပြီ။ Linux သုံးထာတဲ့ computer အတွက် keyboard, mouse, monitor မလိုပါဘူး။
Apparently you are not familiar with linux os at all.
So you should not try it onareal world server.
Try to install onavmware, test it, and try to get familiar with it first.
If your want to use linux as only proxy and will never look it back.(For some Microsoft Addicted)
Choose Smoothwall firewall distro.(This include squid proxy server in build)
ဖြစ်နိင်မယ်ဆိုအသေးစိတ်သိချင်ပါတယ်....သိတယ်လူများရှိခဲ့လို ့ရှိရင်..နဲနဲဖြစ်ဖြစ်ပညာလက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါလို ့တောင်းဆိုပရစေ
You should use VMware workstation on your Window Server and you can install Linux (Ubuntu,Fedora,Red Hat, Any flavour) on it. And use Iptables for Routing and squid for Cache on Linux.
If You are newbie in Linux,you should use Webmin for Linux administration.